Maxay ahayd arrintii uu Macallin Ole Gunnar Solskjær ku qasbay Cristiano Ronaldo kulankii Leicester City? – Gool FM
(Manchester) 18 Okt 2021. Waxaan shaaca laga qaaday arrintii uu Tababaraha Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ku qasbay Cristiano Ronaldo kulankii dhowaa oo ay guuldarrada kala kulmeen Kooxda Leicester City.
Manchester United ayaa kulankii Premier League ee ay booqdeen garoonka King Power Stadium waxa ay kala soo laabteen guuldarro 4-2 ah oo ay kala soo kulmeen Kooxda Leicester City.
Kulankaasi waxa uu ahaa mid Cristiano Ronaldo uu iska dhex taagnaa garoonka oo uusan wax saameyn ah oo uu muuqata ka sameynin guud ahaan ciyaarta, balse markii uu kulanku soo dhammaaday CR7 ayaa sida warbixinta lagu sheegay u dhaqaaqay dhinaca garoonka looga baxo, waxaana uu doonayey inuu dusmada garoonka ka baxo oo uu aado qolka labiska, balse Tababaraha Man Utd ee ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa u sheegay inuu laabto oo uu u sacab tumo taageerayaasha kooxda.
Sidaan oo kale waxaa la xusuustaa in 36-sano jirkaan uu garoonka isaga baxay kulankii ay barbaraha 1-1 ah garoonkooda Old Trafford kula galeen Everton horraantii bishaan.
Yeelkeede, Tababaraha reer Norway ee Ole ayaa sheekadaas ka diiday Ronaldo, waxaana uu u sheegay kulankii Leicester City inuu laabto oo uu ixtiraam u muujiyo Jamaahiirta, ixtiraamka taageerayaashuna uu yahay waxa ugu muhiimsan.
Wargeyska Express ayaa warinaya in Ronaldo uu doonayay inuu markale toos uga baxo garoonka, balse Tababare Solskjaer uu ku qasbay inuu dib u laabto uu u sacab tumo taageerayaasha kooxda ee ula soo sartay Leicester.
Man United ayaa kulammo adag ay ku soo wajahan yihiin, waxaana kulankeeda ugu horreeya ay Old Trafford ku soo dhoweynaysaa Atalanta ciyaar qeyb ka ah Champions League, halka kulankeeda xiga ee horyaalka Premier League ay sidoo kale marti gelinayso Liverpool.